Madaxweynaha oo gargaar caafimaad u balan qaaday gabadhii lagu dhibaateeyey Galdogob
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay falkii kufsiga iyo jirdilka isku jiray ee Galdogob loogu geeystay gabdho Soomaaliyeed.
Maxkamada sare ee Ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil ku xukuntay Xasan Xanafi Xaaji, kaasoo racfaan ka qaatay xukunkii Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada qalabka sida.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inuu deg deg Muqdisho ugu soo laabto, kadib baaqii Xildhibaanada
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu si deg deg ah dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho, isagoo soo gaba gabeynaya booqasho uu ku joogo dalka isu taga Imaaraadka Carabta.
Shiikh Xasan Daahir Aweys oo hada u muuqanaayo mid ay wax iska badalayaan fikirkiisii hore xabsi gurina loo dalay.
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo tan iyo bishii June ee sannadkii hore u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay laga saaray xabsigii uu ku xirnaa, iyadoo la geliyay xabsi guri.
Madaxweyne Xasan Sh oo lakulmay odayaasha beesha uu kasoo jeedo Xasan Daahir Aweys
Sagal Radio Services • News Feature • July 3, 2013